Kedu ka Semalt's Auto & Full SEO si enwewanye ọkwa SEO gị
You bu onye ahia na ntaneti, onye ahia, ma obu onye n’enwe ego nke na enweghi ike ighata webusaiti ha na ha kwesiri? Tried nwara ịbanye n'ụwa nke SEO, mana ọ dị mgbagwoju anya ma na-akarị ike itinye uche gị oge ị na-ejikwa ọrụ azụmahịa kwa ụbọchị. Not nọghị naanị gị.
Iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị mma site na Google ma mepụta ọdịnaya nke na-adọta okporo ụzọ organic na saịtị gị; ịkwesịrị iji usoro SEO rụọ ọrụ nke ọma. N’agbanyeghi na inwere ike ijiri usoro ndị a n’onwe gị, o yikarịrị ka ị ga-emehie ihe nwere ike ịkwụ gị ụgwọ. Cheta: ọ dịghị SEO dị mma karịa SEO ọjọọ. Can nwere ike nweta nsonaazụ ngwa ngwa site na ikenye ndị ọrụ SEO ihe ruru mkpịsị aka ha karịa ka ị nwere ma nwee ndekọ usoro ama ama nke ịnweta weebụsaịtị dị mma SEO.
Semalt bụ ụlọ ọrụ SEO ama ama na ụlọ ahịa dijitalụ nke nyeere ọtụtụ ndị ahịa aka ịbanye na ọnụnọ ha n'ịntanetị. Site na otu ndị odeakwụkwọ nwere ahụmịhe na ndị injinia SEO, Semalt na-enye ọdịnaya dị mma yana mkpọsa SEO dị mma iji bulie okporo ụzọ na ogo.
Tooda dị mma ịbụ eziokwu? Nọgide na-agụ iji matakwuo banyere ya.
AutoSEO: Site na Isi Nchọpụta Ka Nwee On-Page Optimization
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye ahịa n'ịntanetị ma ị dịrịghị njikere imefu ego na SEO n'amaghị nsonaazụ ọ nwere ike, AutoSEO bụ ngwá ọrụ zuru oke nke ga-enye gị nsonaazụ dị mma na ọnụahịa ọnụ. Ndị a bụ ụzọ niile mkpọsa SEO gị nwere ike isi meziwanye na AutoSEO:
Na-emezi Nzipụta Ihe Weebụsaịtị gị:
Ndị ahịa agaghị enwe ike ịhụ ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị ma ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị anaghị ahụ ha. Nanị ụzọ ha nwere ike isi nweta ngwaahịa gị n'ịntanetị bụ site na ị nweta ebe nrụọrụ weebụ gị.
N’otu aka ahụ, iwelie ọhụhụ ụzọ gị na ebe nrụọrụ weebụ abụghị usoro ị nwere ike iji ụzọ mkpirisi ụzọ, ọ na-achọ oge na nraranye; Onye ọ bụla na-enye gị ọgwụgwọ oge dị mkpirikpi ga-eme ka naanị mkpokọta webụsaịtị gị ma ọ bụ tinye ya ntaramahụhụ na Google nke dị njọ ka ọ na-ada.
Na AutoSEO enwere ike inwe obi ike na a ga-ahazi weebụsaịtị gị site na usoro okpu ọcha a nwalere iji weta nsonaazụ dị ukwuu maka ọtụtụ azụmaahịa.
Me ka ịhụ ụzọ gị na ebe nrụọrụ weebụ gị dị bụ nzọụkwụ mbụ na ịbawanye ahịa na-ebute, ma na-ebute okporo ụzọ nje, ọ bụ ya mere atụmatụ nchekwa nchekwa AutoSEO ga-eji nweta Google site na ntanetị nke ọma site na iji okwu ọma ejiri nlezianya chọọ n'oge oge.
Na peeji njikarịcha Nlekọta Ihe niile
Anyị ekwuola banyere visibiliti hụ na ebe nrụọrụ weebụ na etu ọ dị mkpa ka ndị ahịa hụ ngwaahịa gị. Ọdịnaya dị na peeji nke na-emetụta ọhụhụ nke weebụsaịtị gị.
E nwere ọtụtụ ihe na-abanye n'ime njikarịcha peeji: etu esi ede ọdịnaya gị nke ọma, bụ isiokwu ndị bụ isi ndabara gụnyere yana akara LSI; generated mepụtala njikọ njikọ azụ, bulie maka metadata, wee mepụta weebụsaịtị nke nwere ezigbo UX / UI?
Na peeji peeji SEO nwere mkpa imeziwanye nkọwa okwu nke weebụsaịtị ka ndị ọrụ ntanetị dị ka Google ghọta ya nke ọma. Ndị ntanetị weebụ bụ roboti nke ghọtara ihe dị na ntanetị nke ọdịnaya site na ịghọta otu esi enye ya. Nke a gụnyere nyocha asụsụ nke akara ntanetị HTML na iji ntanetị ma ụzọ njikọ iji chọpụta ebe ọdịnaya ahụ dị.
Mmasị dị na peeji nwere ike iyi ihe karịrị ike ma na-achọsi ike itinye n'ọrụ mana ọ bụ ya mere AutoSEO ji bụrụ onye na-azọpụta ndụ! Ọ na-elekọta nchekwube niile ị ga-eme iji melite ogo SEO gị ma bulie nchịkọta gị. Ozugbo ibido mgbasa ozi AutoSEO, ị ga - enwe mkpesa zuru ezu banyere akụkụ dị iche iche nke weebụsaịtị gị nke chọrọ mmezi maka ọkwa dị mma.
Nchọpụta Isi Okwu Maka Niche Gị
Tingtinye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị n'ịntanetị ma na-eche na onye ọbịa ga-eduga na ebe nrụọrụ weebụ gị ezughi. Youkwesịrị ịhapụ achịcha achicha maka ndị ahịa gị nwere ike ịbịakwute gị. Achịcha achịcha ndị ahụ bụ isi okwu na usoro isiokwu nyochachara nke ọma ga-eme ka ọkwa gị dị ka enweghị.
Isi okwu nyocha bu nka. Gụnyere isi okwu na-abụghị naanị olu dị elu ma akọwapụtara nke ọma ebe azụmahịa gị na-arụ ọrụ chọrọ mgbalị ike. Nchikota iji mkpuru okwu ọdụ ogologo na nke ndi ozo di nkpa ka ijide n'aka na odi ha mkpa na ngalaba gi.
Semalt ghọtara mkpa ọ dị ịchọta okwu ndị na-agaghị eme ka okporo ụzọ dịkwuo elu kamakwa gbanwee ha ka ọ bụrụ ahịa ndị nwere ike ịpụta. May nwere ike zuo ike ịmara na azụmaahịa gị n'ịntanetị dị n'aka nke ọma. Site na mkpọsa AutoSEO, ndị injinia SEO nke Semalt ga-anapụta mkpụrụokwu ndị akọwapụtaghị naanị niche gị, kamakwa iwepụta ezigbo okporo ụzọ na ahịa.
Akụkọ gbasara nyocha iji nyocha arụmọrụ gị
AutoSEO ga-emepụtakwa ọtụtụ ọrụ a na-achọta na nchịkọta gị. Semalt bụ ụlọ ọrụ ahịa dijitalụ zuru oke nke kwenyere na nsonaazụ ma nwe ya.
Maka ụzọ niile AutoSEO ga-esi mee ọkwa ọkwa nke weebụsaịtị gị, nyocha ya na-enye ọkwa ọ bụla kwa ụbọchị nke isi okwu a na-akwalite ka ị mara na-etinye ego gị n'ọrụ. Onweghi otu atumatu a nke gha eme ka ahia gota ahia nke oma nagbanyeghi niche ha di, ebe obula ha no n’otu obula dabere na usoro SEO ya n’eji. Inwe ihe nyocha iji gosipụta etu atụmatụ ndị ahụ si arụ ọrụ nke ọma ga - enyere gị aka ime mkpebi ndị ka mma ma melite ebe ndị chọrọ enyemaka ọzọ.
Onye njikwa Semalt nke onwe gị - nke dị n'oge ọ bụla - ga-enye akụkọ nyocha banyere email na site na sistemụ ime, iji mee ka ị mara banyere mkpọsa na-aga n'ihu.
FullSEO: Site na Ederede Ọdịnaya Iji Jikọọ inweta & N gabafe
Semalt na-enyekwa FullSEO ma ọ bụrụ na ị na-achọ ime ka ebe nrụọrụ weebụ gị niile kwekọọ dabere na ụkpụrụ SEO, nke a bụ ihe ị ga - enweta:
Ederede Na Adịghị Ederede na-enweghị Akwụkwọ
Ga - enwe ike ịchọta mkpụrụokwu kachasị dị irè ịchọrọ mana ị gaghị edokwa ma ọ bụ mepụta okporo ụzọ ma ọ bụrụ na ọdịnaya ị na - ewepụta anaghị enye ndị na - agụ ya uru. Inwe ọdịnaya nke abụghị naanị njigide, mana idozi nsogbu na ihe ọmụma bụ isi ihe iji jigharị ndị na - agụ akwụkwọ ahụ. Semalt nwere otu ndị na - ede akwụkwọ nke maara nke ọma ụdị ọdịnaya ga - eme ka okporo ụzọ na ahịa nke weebụsaịtị gị dịkwuo mma.
Njikọ njikọ & N'azụ
Enwere ọtụtụ ihe na-abanye na mkpọsa SEO dị irè ma e wezụga nchọpụta isiokwu. Linklọ njikọ dị irè - akụkụ nke ihu peeji (SEO ọrụ) bụ otu n'ime ha. Gbalịa hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị ka nma nke ọma na njikọ nke ime na nke mpụga ka iwepu njikọ ndị na-adịghị mma ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ dị mkpa. Ngwá ọrụ FullSEO nke Semalt na-agba mbọ hụ na emezuru ihe niile metụtara ụlọ njikọ njikọ nke ọma ka ọnụ ọgụgụ nke njikọ njikọ ọnụ ụzọ dị mma na websaịtị gị na-abawanye maka ogo ogo weebụ gị na SERP. Ọ gụnyere ịgbakwunye njikọ azụmaahịa dị elu na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere nnukwu UR / DR.
Idozi Njehie Weebụsaịtị
Ọtụtụ mgbe, ebe nrụọrụ weebụ nwere ọtụtụ njehie ma ọ bụ njikọ na-ezighi ezi nke nwere ike ịchọpụta ma ọ bụrụ na i jighị teknụzụ weebụ dị ka HTML. Na FullSEO, a na-eme nyocha sara mbara nke weebụsaịtị gị ebe a na-elekọta nook ọ bụla iji jide n'aka na a na-agbaso ụkpụrụ Google Search Engine nke bụ isi.
Site na nchịkọta nke Semantic, ndepụta nke njehie niile bụ nke Semalt mere ma dozie ya. A ga-agwa gị mgbanwe niile dị mkpa site na Semalt SEO. Weebụsaịtị gị kachasị nke mere na ndị web-crawlers nwere ike ịghọta ya nke ọma ma bulie ya elu na ebe ọchụchọ gị zubere. A na-ekenye gị onye njikwa, onye ga - eme ka ị na - enwe ọhụụ.
Ndụmọdụ & Nkwado
Dịka anyị kwuru na mbụ, ya na FullSEO ị ga-enweta ndị otu ndị ọkachamara iji hazie atụmatụ SEO nke ga-akacha mma maka gị. Ndị otu ahụ nọ n'oge ọ bụla maka ajụjụ ọ bụla ị nwere ike ị ga-eme ma usoro nkwukọrịta ga-emeghe mgbe niile.
Onye njikwa gị na-enyocha ọganihu nke mkpọsa nke FullSEO gị kwa ụbọchị ma na-emelite gị site na akụkọ mkpesa na akụkọ nyocha arụmọrụ zuru ezu banyere otu mkpọsa ahụ na-eme.
Ndị otu nkwado na onye njikwa SEO nkeonwe gị nọ ebe ahụ iji hụ na ị nwetara ọrụ kachasị mma ka ha na-agbasi mbọ ike na ogo weebụsaịtị gị ma na-abawanye okporo ụzọ.
Semalt bụ ụlọ ọrụ dijitalụ kwụsịrị ga-ewere ọkwa weebụsaịtị gị na nyocha gị gaa nke ọma maka ihe ịga nke ọma. Ma ị họọrọ iso AutoSEO ma ọ bụ FullSEO mkpọsa ị ga-enweta nkwado ọkachamara site na otu ndị ọkachamara ruru eru na ngalaba SEO na mmepe weebụ. Can nwere ike ịtụkwasị obi na ọnụnọ gị n'ịntanetị dị n'aka Semalt enyerela ọtụtụ azụmahịa aka ime nke ọma ma mee ka weebụsaịtị ha dị elu site n'aka Google.
Ọ bụrụ n’inwere mmasị ibido, kpọtụrụ ndị otu anyị iji chọpụta ihe ga-adabara gị na azụmahịa gị.